IBarn, iFama yaseNether Hoff
Isanda kulungiswa ngokupheleleyo i-18th Century Barn enokufikelela kwayo ngasese. Ukusetyenziswa kwegadi ukuhamba nenja yakho-ukuba nje awukhathali ii-cocker spaniels ezimbini ezinokukujoyina! Ifakwe kwiNtlambo yase-Eden enokufikelela ngokulula kwiSithili seLake- ngoku yindawo yeLifa leMveli le-UNESCO. Ukuhamba okuninzi okuthandekayo kule ndawo, kunye neendawo ezininzi zokutya kunye nokusela.
Wonke umgangatho womhlaba kunye nenqanaba elinye elincinci ukuya kumnyango wangaphambili nangasemva. Ihlaziywe yakumgangatho ophezulu kakhulu kunye nemiqadi eveziweyo kunye nempahla esemgangathweni. Ibhedi enkulu yokumkani kunye nelinen kunye neetawuli zinikezelwa. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-electric AGA City cooker (imiyalelo ibandakanyiwe!). Kukho nenkqubo ye-alam.
Imiswe kwiNtlambo yase-Eden, iColby ingaphandle nje kweAppleby-in-Westmorland, eyayisakuba yidolophu yaseWestmorland. Kukho iCarlisle-Settle Railway eyindlela entle yokukhwela uloliwe kunye neendawo zokumisa uhambe.
Mhlawumbi siza kube sikhona kwaye wamkelekile ukuba unkqonkqoze emnyango okanye ufowunele ukuba kukho ingxaki.